स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ,अस्पतालबाट हराएका सांसद भेटिए होटलमा,शंकास्पद गतिबिधि -
स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ,अस्पतालबाट हराएका सांसद भेटिए होटलमा,शंकास्पद गतिबिधि
काठमाडौं -निकै नै माहमारिकोम रुपमा फैलिएको बिश्वब्यापी कोरोना संक्रमण यातिबेला निकै गरि झागीएको छ । सडक देखि संसद भवनसम्म कोरोना फैलिएको छ । यतिबेला धेरै जसो व्यक्ति थला परेका छन् भने दिनप्रतिदिन मृ,त्यु संख्या पनि बढ्दै गएको छ । केहि दिन देखि एकाएक हराएका भनिएका पछि कोरोनाले थला परेर अस्पताल भर्ना गरिएको भनिएका जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाही अस्पताल छाडेर सुटुक्क होटेलतिर लागेका छन् । कोभिड १९ संक्रिमत भएको भन्दै १५ गते नै चरक मेमोरियल हस्पिटलको आइसियुमा उनी भर्ना भएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको मुख्यममन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन वैशाख १५ गते उनी एकाएक हरा,एका थिए । मुख्यमन्त्री बि,वाद साम्य भएपछि उनी सुटुक्क अस्पतालबाट निस्केका छन् । उनी होटलमा बसेको जानकारी पार्टी नेताले नै जानकारी दिएका छन् ।
उनलाई आइतबार साँझ नै अस्पतालबाट निकालेर फेवासिटी हस्पिटल नजिकैको एक सामान्य होटेलमा राखिएको छ । उनले आफू बि,रामी नै परेको दावी गर्दै आएका छन् । तर उनका गतिविधिले भने शं,का गर्ने ठाउँ राखिदिएको छ । होटेलमा बसेका उनी हेर्दा तन्दुरुस्त नै देखिने र खाना पनि सामान्य खाने गर्नाले उनको गतिबिधि शंकास्पद देखिएको हो । उनलाई भेटेर आएका एक सांसदले भने, ‘बाहिर मिडियामा के के आएको छ रे भन्दै चिन्ता जनाउनुभएको थियो, उहाँको अवस्था सामान्य नै रहेछ ।
सांसद शाहीको १५ गते आएका ३ वटा पिसिआर रिपोर्टमा अलग अलग नतिजा आएको छ । १४ गते प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा लिएको स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आए पनि १४ गते नै लिइएको भनिएको अर्को स्वाब परीक्षणमा भने कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । उनको भनिएको दोस्रो स्वाब लाइफकेयरमा परीक्षण गर्दा सिटी भ्यालु १६ उल्लेख थियो ।
तर सोही दिन परीक्षण गरिएको अर्को स्वाबमा कोरोना पोजेटिभ नै भए पनि सिटी भ्यालु ३९ छ । उनै सांसद ‘हराए,पछि’ स्थगित भएको गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशको बैठक अझै अनिश्चित बनेको छ । बैठक सदन चलाउन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले डाकेको बैठक निश्कर्षविहीन भएको छ । भाईरल नेपाल न्युजमा समेत समाचार लेखिएको छ ।
Previous दु:खद खबर ! झ्याल-ढोका बन्द गरेर कोइला बाल्दा दिदीको मृ,त्यु, आमा र सुत्केरी बहिनी बे!होस
Next लग डाउनको बेला युवतीलाई आफ्नो कोठामा बोलाएर गरे अनैतिक कार्य,को हुन् ति युवक ?
वाग्लेका योजनाकार यिनै हुन् ढुण्डी,यौनधन्दा देखि ………सम्म सत्य रहेछ ।
आमा शब्द आफैँमा पूर्ण र भरिपूर्ण मात्र होइन, सम्पूर्ण पनि हुन्
यौ,न सम्पर्क शुरु गर्नु भन्दा पहिले महिलाको चाहाना
कोरोना संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृ:त्यु